सरकार र नेताको हेल्चक्राईले फैलियो तेस्रो लहर, तत्काल यस्ता कार्य नगरे नियन्त्रण बाहिर जान्छ - Ankuran Khabar
January 23, 2022 / २०७८ माघ १०, सोमबार
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्न गठबन्धनका नेतालाई कानुन व्यवसायीको सुझाव... २०७८ माघ ९
कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि राष्ट्रिय महिला लिग स्थगित... २०७८ माघ ९
पर्यटनमन्त्री प्रेम आले कोरोना मुक्त... २०७८ माघ ९
जनकपुरमा प्रधानमन्त्री देउवा र मन्त्री यादवको पुतला दहन... २०७८ माघ ९
बारागाउँकी एक किशोरी भीरबाट लडेर मृत्यु... २०७८ माघ ९
सरकार र नेताको हेल्चक्राईले फैलियो तेस्रो लहर, तत्काल यस्ता कार्य नगरे नियन्त्रण बाहिर जान्छ
२०७८ पुष २७0
नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या दैनिक बढ्दै गएको छ । संक्रमितको संख्या बढेसंगै सरकारले विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेको छ भने, बढी भीडभाड हुने कुनै पनि भोज भतेर, सभा,सम्मेलन लगाएतका कार्यक्रम नगर्न निर्देशन दिएको छ । औपचारिक रुपमा तेस्रो भेरियन्ट फैलिएको नभने पनि चिकित्सकहरुले तेस्रो लहर सुरु भैसकेकाले यसबाट बच्न र बचाउन अधिकतम सावधानी अप्नाउनु पर्ने बताउँदै आएका छन् ।
नयाँ भेरियन्ट मानिएको ओमिक्रोन र पुनः बढ्दो संक्रमणले के कोरोनाको तेस्रो लहर सुरु भएको हो भन्ने प्रश्न आम मानिसमा उब्जेको देखिन्छ । के साच्चै नेपालमा कोरोनाको तस्रो लहर आएकै हो त ? पहिलेको तुलनामा तेस्रो लहर बढी संक्रामक हो या उस्तै हो ? यसबाट बच्न के गर्नुपर्छ ? लगाएतका विषयमा तेस्रो लहर भित्रिसकेकाले सचेतता अप्नाउन सुझाव दिँदै आएका प्रा.डा. जागेश्वर गौतमसँग अंकुरण खबरका लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश…
नेपालमा कोरोनाको तेस्रो लहर सुरु भएको हो ?
हो, कोरोना संक्रमणदर हेर्दा कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर सुरु भइसकेको छ । सरकारले नभने पनि हामीले भन्दा तस्रो लहर सुरु भइसकेको छ ।
नेपालमा कोरोनाको पुराना भेरिएन्टको संक्रमित बढेका हुन् की ओमिक्रोन संक्रमित ?
पहिला कोरोनाको टेस्ट हुन्छ त्यसमा पोजेटिभ र नेगेटिभ छुट्याउने गरिन्छ । कोरोना भाइरसको पुरानो भेरिएन्ट हो की ओमिक्रोन हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउन त जिन सीक्वन्सिङ गर्नुपर्छ । नेपालमा ओमिक्रोन भने पत्ता लागिसकेको अवस्था छ । तर कती मात्रामा ओमिक्रोन हो,कती मात्रामा डेल्टा हो भन्ने कुरा सीक्वन्सिङ गरेर मात्र थाहा पाइन्छ । अहिलेनै एकीन भन्न सकिन्न् ।
अहिले तेस्रो लहर भित्रिनुमा राजनीतिक पार्टीहरुको सभा सम्मेलन नै प्रमूख कारण हो । नेपालमा सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले त सचेत हुन जान्दैनन् भने आम सर्वसाधारणको के कुरा । अब जतिसक्दो सावधानी अप्नाउदै खोप अभियानलाई तिव्रता दिन ढिला गरे स्थिति नियन्त्रण बाहिर जानसक्छ ।
कोरोना संक्रमणदर ह्वातै बढ्नुको कारण के होला ?
हामी जनस्वास्थय विज्ञहरुले पहिलेनै भनिरहेका थियौं, नेपालमा जसरी पार्टीका अधिवेशन, महाधिवेशन भए,बिहे,भोज भतेर, जुलुस, नारा भए जे नहुनुपर्ने थियो त्यो भयो । संक्रमण बढ्नुको प्रमूख कारणनै यही हो ।
के राजनीतिक दलले नबुझेकै कारण यो अबस्था आयो भन्न खोज्नु भएको हो ?
नबुझेको भन्दा नी बुझेर बुझ पचाएको जस्तो लाग्छ । यहाँ न सरकार, राजनीतिक पार्टीले कोरोनालाई समस्याको रुपमा लिए न सर्वसाधरणले । नेपालमा त राजनीतिक नेतृत्वले समस्या बुझ्न नै चाहादैनन् । विज्ञहरुको कुरा नै सुन्दैनन् । नेतृत्वले कुरा नबुझेपछि अरुले झन के कुरा बुझछन् । मलाई लाग्छ हामी उल्टो बाटो हिडिरहेका छौं । चिकित्सकले कुरा गरे चिकित्सकको मात्र समस्या जस्तो ठान्ने व्याबहारले यो अबस्था आयो । सबैले समस्याको रुपमा लिनुप¥यो नी समाधान गर्न त ।
कोरोना संक्रमणदर बढ्दो छ,अब के गर्न आवश्यक छ ?
हामीले १०-१५ दिन अगाडि देखिनै भनिरहेको नै थियौं,तयारी गर्न ढिला भइसकेको छ । अहिले तत्काल गर्नु पर्ने काम यस्ता छन्…
पहिलो : जनस्वास्थ्यका मापदण्ड सबैले लागु गर्ने । भिडभाड हुने सबै काम रोक्नु पर्छ ।
दोस्रो : छिमेकी मुलुक भारतमा संक्रमणदर बढेको छ,बोडर हाम्रो खुल्ला छ । केहि नाका मात्र खोल्ने र त्यहाँ टेस्ट गर्ने,पोजेटिभ आएकालाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने,नेगेटिभ आएकालाई पनि १० दिन क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ । नेपालका ठुला शहरहरुमा संक्रमणदर बढ्छ । त्यसैले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कडाइ गर्नुपर्छ, अन्य देशबाट आएका सबैलाई अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्दछ । क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
तेस्रो : कोरोनाको टेस्ट बढाउनुपर्छ ।
चौथो : कोरोना पोजेटिभलाई आइसोलेसनमा राख्नुपर्छ ।
पाचौं : अक्सिजन,आइसियू, भेन्टिलेटर लगाएत अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्न सरोकारवाला सबै लाग्नु पर्छ । कन्ट्रयाक ट्रेसिङलाई बढाउनुपर्यो,खोपका कार्यक्रमलाई व्यापक बनाउनुपर्छ । हाम्रोमा खोप ल्याएको छौं लगाएका छैनौं,खोप अभियानलाई तिव्र पार्नुपर्छ । अन्यथा स्थिति नियन्त्रण बाहिर जान नसक्ला भन्न सकिन्न ।
आत्महत्याका कारण अभिभावक गुमाएका परिवारलाई आर्थिक सहयोग
२ हजार ४४४ जनामा कोभिड १९ संक्रमित थपिए
राजनीति स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्न गठबन्धनका नेतालाई कानुन व्यवसायीको सुझाव
Breaking News कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि राष्ट्रिय महिला लिग स्थगित
Breaking News पर्यटनमन्त्री प्रेम आले कोरोना मुक्त
राजनीति जनकपुरमा प्रधानमन्त्री देउवा र मन्त्री यादवको पुतला दहन
स्थानीय बारागाउँकी एक किशोरी भीरबाट लडेर मृत्यु